Ukurhwebesha uBhaliso lwe-imeyile, abapapashi kufuneka bangqine ubuchule babo boBuntu ngokuSayina ngokoMxholo | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Matshi 4, 2022 NgoLwesihlanu, Matshi 4, 2022 UJeff Kupietzky
Ishishini lokupapasha libonakala lihamba lonke ngamandla eendaba ze-imeyile ukubandakanya abaphulaphuli kunye nokuqhuba ishishini. Ekuqaleni, Axios ibhengezwe emva ngoSeptemba ukuba iyakwandisa iindaba zayo zasekhaya ngokuphehlelelwa kweendaba ezisibhozo ezijolise ngqo kwisixeko. Ngoku, the Atlantic ibhengeze ukuqaliswa kwe-imeyile ezintlanu ezintsha, ukongeza ngaphezu kweshumi elinesibini leminye imirhumo ye-imeyile ekhethekileyo esele isasazwa.
Yintoni aba kunye nabanye abavakalisi abaninzi abayaziyo kukuba iincwadana ze-imeyile ezijoliswe kuzo zinika ababhalisi kanye into abayifunayo: ugutyulo olufutshane lwezihloko kunye nemiba abayikhathaleleyo ihanjiswe ngokuthe ngqo kwi-inbox yabo.
I-infodemic yehlabathi iqhube ukuthembela kuyo yonke imithombo yeendaba ukurekhoda i-lows kumajelo asekuhlaleni (35%) kunye namajelo eendaba angabanini (41%) awona athembekileyo; amajelo eendaba emveli (53%) abone ukuhla kwentembeko kukhulu kumanqaku asibhozo kwihlabathi jikelele.
As ukuthembela kumajelo asekuhlaleni kwehlile ngokukhawuleza, abathengi banqwenela enye indlela, kwaye i-imeyile iyahambelana netyala. Ngokubonelela ngokuthe ngqo, 1: 1 ubudlelwane kunye nababhalisi, abapapashi banokusebenzisa i-imeyile ukusika umntu ophakathi kunye nokuhambisa umxholo ochanekileyo ngakumbi. Oku akuhlangabezani nokulindelwe ngabathengi kumava e-bespoke aziva ngathi ilungiselelwe bona kuphela kodwa ikwavumela abapapashi ukuba bafunde ngakumbi malunga nababhalisileyo nabangazithandiyo ngokuziphatha ngokucofa, ukuze abapapashi bacule ngokuchanekileyo iingcebiso zomxholo.
Ngelixa itekhnoloji ye-automation yenze ukuba kube lula ukuba abapapashi basebenzise ubukrelekrele bokwenziwa (AI) kunye nokufunda koomatshini ukuqonda ukuziphatha kwababhalisi babo-into abayicofayo, kunye nento abangenayo-kunye nokuhambisa umxholo ojoliswe kuwo, sisiqingatha kuphela sokulwa. Ukufumana abasebenzisi ukuba babhalise kusengumqobo, nakuhlelo lwasimahla lweleta yeendaba.
Phakathi kweenkxalabo malunga nobumfihlo, ukwabelana okanye ukuthengiswa kwedatha yabo, kunye ne-spam, abanye abasebenzisi bayathandabuza ngokuqondakalayo, kwaye oko kwenza kube nzima ngakumbi kubavakalisi ukubaqinisekisa ukuba kufanelekile ukubhalisa. Ewe kunjalo, ayithethi into yokuba abapapashi kufuneka babonelele ngengqinisekiso malunga nobumfihlo bedatha - ezo zizithintelo zetafile kwindawo yanamhlanje yedijithali, singasathethi ke ngokugunyaziswa ngumthetho. Kodwa abasebenzisi basafuna ukwazi ukuba baya kufumana umxholo obalulekileyo, ofanelekileyo.
Ukubhaliswa ngokomxholo kuye kwavela njengenye yeendlela ezisebenzayo zokungqina kubasebenzisi ukuba baya kufumana amava alungiselelwe umntu, alungelelanisiweyo abawalindeleyo. Kodwa iimpapasho ezininzi ziphosakele eli thuba lixabisekileyo. Umtyeleli wesiza ongaziwayo unokucofa kwindawo ethile yewebhusayithi-imidlalo, umzekelo, okanye into ethe ngqo ngakumbi njenge I-NY Mets or Chicago Blackhawks iphepha lokugubungela iqela-kwaye abapapashi bababonise ngonikezelo lokubhalisa lwe-imeyile ngokubanzi. Le yimpazamo enkulu, kwaye lithuba elikhulu eliphosiweyo lokubonisa umsebenzisi indlela onokuthi uhambise ngayo umntu, umxholo ojolise kwimeko abawufunayo.
Kunoko, abavakalisi kufuneka baqalise misela umxholo Ukunikezelwa kokubhalisa ukubonisa ubuchule babo bomntu-ukubonisa ukuba ababhalisi baya kufumana umxholo owulindeleyo. Ngokusebenzisa i-AI ekujoliswe kuyo, kwanopapasho oluncinci lunokuzisa unikezelo lokubhalisa olubandakanya abasebenzisi kwaye babahende ukuba babhalise. Kwaye akufuneki kube nzima. Umzekelo, ukuba umsebenzisi ongaziwa undwendwela iphepha lokunitha kwindawo yokwenza, endaweni yokunikezela ngobhaliso lwegeneric, endaweni yoko bacebise ukuba babhalisele ukufumana iipateni zokunitha ezili-12 ezilandelayo ziposwe. Okanye umshicileli wegadi unokubonelela ngee-imeyile zakhe zomcwangcisi wegadi yemifuno encinci kubasebenzisi abandwendwela iphepha leebhedi eziphakanyisiweyo, okanye umxholo wegadi yendalo kwabo bandwendwela iphepha lomgquba.
Ngelixa ngokuqinisekileyo kulula ukujolisa umxholo kumsebenzisi owaziwayo xa sele ebhalise njengombhalisi kwaye ungaqala ukulandelela indlela abaziphatha ngayo, kuthatha nje i-finesse encinci ukunyusa i-tidbits yedatha ukuqalisa loo ncoko-ukudala imvakalelo yokunxibelelana nomsebenzisi.
Ngokubonisa ukukwazi ukuhambisa umxholo olungiselelwe umntu, ogcinwe ngokunikezela ngolo hlobo, abapapashi banokuloyisa ukuthandabuza kwababhalisi ngokuqinisekisa abasebenzisi abatsha ukuba baya kufumana amava omntu abawalindeleyo. Oko kwakha ukuthembana, ukuzithemba, kunye nokunyaniseka, ukuvumela nabavakalisi abancinci ukuba banyuse ukubhaliswa kwabo kwincwadana yeendaba kunye notyalo-mali oluncinci kunye nomzamo, ukuhambisa i-ROI enamandla kunye nexabiso leshishini elisezantsi.
tags: axiosiChicago blackhawksusayino ngokomxholoEdelman trust barometerUkubandakanya i-imeyileabapapashi emailukusayinwa kwe-imeyileImirhumo ye-imeyilejeengny udibanaNgokwezifisowabucalaabavakalisiababhalisileyoImidiya yokuncokolatrust kwimidiya yoluntukwiatlanticthemba